WAHAABINIMO MISE ISLAAMNIMO?
Anigoo tixraacaya qoraalkii hore ee isla moduucan, ayaan waxaan qormadan kaga hadlayaa laba qodob oo kala ah:
· Mabaadi’dii dacwadii sheekha ? Mase jiraan wax cusub oo uu la yimid?
· Yaa ka horyimid maxaase looga horyimid?
Jahliga ayaa isna gaarey heer la kala garan waayey saxdii iyo khaladkii, sunnadii iyo bidcadii, munkarkii iyo macruufkii. Waxaa aad u faafay curraafaysiga iyo kooxaha cilmiga waxyaabaha dahsoon sheegta. Culimadii iyo xerihii markaas cilmiga raacanjirey ayaa badankoodu iska daayeen culuumtii labada waxyi, wuxuuna dadaalkoodu kusoo uruuray in ay daraaseeyaan kutubtii madaahibtooda. Kitaab “mudawwal” ah[fidsan] soo gaabintiisa, mid “mukhtasar” ah [gaaban] sharixiddiisa ama gabay u baddiliddiisa, mid horay loo sharxay sii faahfaahintiisa ama "xawaashi" saaristiisa ayaa shuqul u noqotay, halkii ay ka daraasayn lahaayeen cilmiyada Quraanka iyo Sunnada. Waxaa yaraa caalim oranaya: "anigu toos ayaan waxyiga wax ugasoo qaadanayaa"
MABAADI'DII DACWADA SHEEKHA, MASE JIRAAN WAX CUSUB OO UU KEENAY?
Isagoo haddaba xal u raadinaya mashaakilkaas ayuu sheekhu ku dhawaaqay dacwadiisii islaaxa iyo sixitaanka ahayd. Wuxuuna ku saleeyey afar qodob ama mabda' oo ay dacwadiisu ku qotontey:
1. Mabda'a 1-aad: In Tawxiidka la barax tiro, cibaadadana dhammaanteed Rabbi lala beegsado. Dhammaan dadkii markaas joogey waxay ku dhawaaqayeen "kalimadda tawxiidka" haddana sidaasoo ay tahay qaar badan ayaan macnaheeda fahmayn, oo falayey waxyaabo burinaya kalmaddaas.
Waxaa caadi noqotay in "tawxiidka" lagu fasiro: "Qiritaanka jiritaanka Rabbi" iyadoo cibaadooyinkii uu Rabbi gaarka u lahaa loo weecinayo "awliyada" iyo "saalixiinta". Wuxuu sheekhu dadka u sheegay in tawxiidka macnihisu aanu ku koobnayn in la ogaado Khaaliqnimada Rabbi ama jiritaankiisa. wuxuu yidhi: Tawxiidka waxaa soo hoos galaya saddex arrimood oo kala ah:
1 In la qiro midnimada khaaliqa uunka oo idil abuuray, lana ogaado in isaga oo kali ahi uu leeyahay maamulka iyo maaraynta. Wax walba oo adduunka ka dhacana sida abuuridda iyo ahaysiinta, irsaaqadda, noolaynta, dilista, maamulka iyo mulkigaba in uu isagu leeyahay. Kaasi waa qiritaanka rabbinimada Ilaahay.
2 In ilaahay loo qiro dhammaan "magacyada" iyo "tilmaamaha" uu leeyahay ee ku sugnaaday Quraanka iyo Sunnada. Wuxuu yidhi: waa in Ilaahay lagu tilmaamo wixii uu isagu isku tilmaamay, sida sarrayntiisa, gacnihiisa, wajigiisa iwm. Waxaa reebban in loo raadiyo macne aan ahayn kan ay kalmadahaasi leeyihiin. Tacttiilka, ta'wiilka, takyiifka iyo in Ilaah cid kale lagu shabbaho ayaa iyana reebban.
3 Tawxiidka qaybtiisa saddexaad ayaa iyana ah: In cibaadada ka imaanaysa xagga aadamaha lagu gaar yeelo Ilaahay . Cid aan Ilaahay ahayn wax cibaadada ka mid ah, haba yaraatee, lama siin karo. Baryo, gawrac, cabsi iyo rajeyn toona Ilaahay lalama wadaago.
Kala caddayntaas iyo qeexitaankaas hufan ee tawxiidku waa kan ay ilaa hadda fahmi la'yihiin kooxaha sida gurracan u fakara ee dariiqooyinku.
2. Mabda'a 2-aad: In fahamka diinta laga qaato Salafkii [saxaabadii iyo taabiciintii] islaamkana loo qaato sidii ay iyagu u qaateen, Quraanka iyo Xaddiiskuna ay noqdaan meesha daliilka loo raadsanayo.
Taasi waxay ahayd muhiim, maxaayeelay waxaa yaraaday aqoontii loo lahaa kitaabka iyo sunnada, waxaana dadka ka qaalib noqotay barashada waxyaabo kale oo aan muhiim ahayn, ama aanba bannaanayn. "Falsafadda" iyo "mandiqa" ayaa noqday kuwo caqiidada lagu saleeyo. Xagga "fiqhiga" ayaa wuxuu kusoo ururay kutub "hadal miiran" ah oo aan wax daliil ah la cuskinayn. Waxaa la illaawey caqiidadii Ahlu-sunnaha, waxaa in badan laga inxiraafay fahamkii Rasuulka (sallallaahu caleyhi wasallam) iyo saxaabada. Xagga xadiiska waxaa is dhex galay "saxiixii iyo daciifkii". Haddaba waxay ahayd muhiim in diinta la saafi yeelo, dadkana loo celiyo "kitaabka iyo sunnada" oo sidii ay "salafku" u fahmeen ah.
3. Mabda'a 3-aad: In la tuuro oo laga tago "bidcooyinka" siday u dhanyihiinba. Qodobkani wuxuu ahaa midkii ugu adkaa xagga dhaqan gelinta. Waxaana arrintaasi sii bari taarayey jahliga iyo faafitaanka bidcooyinka oo aad u xoogganaa. Waxaa ugu darnaa bidcooyinka xagga caqiidada oo iyagu shirki dabada ku haya. Kuwa la xiriira qubuuruhu waxay ahaayeen kuwo aad u baahsan isla markaana khatar ah. Mawliidyada ayaa tiro dhaafay oo sheekh walba oo wali la moodo wuxuu iska lahaa mawliid isaga lagu xuso. Waxaa jirey qaar fiqiga wax ka bartay oo dadka u jideynjirey ama u sharciyeynjirey bidcooyinkaas iyagoo ugu sheegaya "Bidcah xasanah" ama bidco wanaagsan. Haddaba sheekhu wuxuu soo jeediyey "in bidco oo dhami ay tahay baadinimo", sideedana aanay jirin bidco wanaagsan. Wuxuuna arrintaas u daliishaday axaadiista Rasuulka (s.c.w.)
4. Mabda'a 4-aad: In ijtihaadka albaabada loo furo. Taasna wuxuu uga gollahaa in laga tago tacasubka madaahibta sida miyir la'aanta ah loogu tacasubayo. Waxaa la xooray culuumtii labada waxyi oo waxaa lagu beddeshey hadallo wadaaddo yiraahdeen. Wuxuu dadka ku yidhi: Kitaabka Allah iyo sunnada suubanaha (s.c.w.) toos u aada, axkaamtana kasoo qaata. Taasina khayr aan la filayn baa ka dhashay oo ah in dadkii u jeesteen barashada cilmiga dhabta ah. Waxaana soo baxay culimmo mujtahidiin ah.
WAX CUSUB MIYUU LA YIMID SHEEKHU?
Waxaa mabaadi'daas ay ku dhisnayd dacwada sheekhu inoo muujinayaan in baaqiisu uu ahaa "cusboonayn" ee aanu ahayn wax "cusub" oo hor leh. Wuxuu baaqaasi cusboonaysiinayey mabaadi'dii islaamka ee asliga ahaa, ee uu rasuulkeennu (s.c.w.) awalba horay u caddeeyey. Wuxuu dadka u celinaysey fahamkii saxaabada iyo salafka. Mana aanay jirin haba yaraatee wax dacwadiisa ku cusbaa.
Bal haddaba intaad dib ugu laabatid mabaadi'da aynu kor kusoo xusnay waxaad ka raadisaa wax diinta ku cusub. Heli maysid.
Sheekh Zuxeyli (caalimka reer Suuriya) wuxuu yidhi: "Waxaan shaki lahayn in dacwada sheekhu ay ahayd mid cusboonaysiinaysey nolosha muslimka, kana xayuubinaysey wixii ay caamadu dul saareen ee khilaaf, khuraafo, bidco iyo qallooc ahaa. sidaas darteed sheekhu wuxuu ahaa: Halyeygii kacdoonka islaaxa ee la sugayey, kaasoo soo ban dhigay miisaankii caqiidada oo sax ah, iyo dhabtii tawxiidkii khaaliska ahaa, iyo in cibaadadu ay tahay tawxiidka. Wuxuuna doontii u jeediyey halkii ay ka timid iyo ku dhaqanka quraanka iyo sunnada"
Isagoo sii caddaynaya inaan dacwadan wax cusubi ku jirin wuxuu (Zuxeyli) yidhi: "Haba yaraatee wax cusubi kuma aanay jirin dacwadaan, wixii uu dadka ugu baaqayna ma ahayn wax cusub, Islaamkana wax cusubi maba soo geli karaan, oo waa waxyi iyo axkaam xag Alle Nabiga (s.c.w.) loogasoo dhiibey. Markii uu geeriyoodayna ummaddiisa waxaa u furnaa inay raadkiisii raacaan oo kaliya, sunnadiisiina ay ku dhagaan".
YAA KA HOR YIMID, MAXAYSE UGA HOR YIMAADEEN?
Waxay kaloo qoladaas danwadaag ahaayeen kuwii amiirrada ka ahaa gobollada kala duwan e Jaziiradda, oo u arkay in dacwadani maja-xaabinayso xukunkii ay haysteen. Turkiga oo dunida Islaamka markaasi xukumey, ayaa iyaguna u arkay in dacwadani ay baraarujinayso dadka carbeed oo markaas ay habbiso saarnayd. Dawladda Ingiriiska ayaa iyaduna si ula kac ah ugu qaadday dagaal dicaayad iyo dira-diraale ah. Waxa la yaab leh sida ay u kala yaqaaniin cidda diinta sida saxda ah u haysata oo ay duullaan ku qaadaan, iyo kooxaha bidcoolayaasha ah. Waxaan marnaba la hilmaami karin sidii diirranayd ee Ingiriisku u abuuray una soo dhaweeyey kooxaha sida "Qaadiyaaniyah" iyo "Baabiyah" oo iyagu ah kooxo gaalo ah, islaamkase ku gabbada.
o Culumadii taageerada iyo bogaadinta siisay dacwadii sheekha.
o Saamaynta dacwadiisa Dunida Islaamka iyo Soomaaliya, oo aynu soo gudbinayno caalim soomaaliyeed oo waagaas joogay kana hadlay dacwadaas, iyo raadkii ay dacwadaasi ku reebtay boqortooyadii Bariga Soomaaliya.
Waase haddii Allah idmo.
Wixii sixitaan ama dhaliil ah iigusoo dir e-mailkayga:
Qaybtii hore ee qormadan:
Xaggee buu ka yimid magaca wahaabiyo
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 18, 2005